उपहारहरू जुन २०१० छुट्टीको मौसमको लागि स्वास्थ्य सेवालाई फिर्ता दिन्छ - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण खेलहरु कल्याण प्रेस समुदाय स्वास्थ्य समाचार, कल्याण मनोरञ्जन
मुख्य >> समुदाय >> उपहार जुन फिर्ता दिन्छ health स्वास्थ्यको लागि
उपहार जुन फिर्ता दिन्छ health स्वास्थ्यको लागि
यो छुट्टी पार्टीहरूको मौसम हो, रमाइलो भोजन, राम्रो जयकार — र उपहार दिने। त्यहाँ एक विशेष आनन्द छ जुन एक साथी वा परिवारको सदस्यले प्रस्तुत खोलेको ओह-सोचे-सोच विचार गरी उठेको र प्याक गरेको देख्दा आउँछ। केवल एक चीज जसले त्यो भावनालाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ? यो कुरा थाहा पाउँदा कि उदारताले कसैलाई खाँचोमा पर्यो।
जब तपाइँ तपाइँका प्रियजनहरू मध्ये प्रत्येकका लागि उत्तम आईटमको खोजी गर्नुहुन्छ, यी कम्पनीहरूको जाँच गर्नुहोस् जुन परोपकारी संस्थासँग साझेदारी गर्दछ जुन विश्वभरिका मानिसहरुको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
पाँच मध्ये एक जना संग संघर्ष गर्दछ मानसिक स्वास्थ्य अवस्था विशेष गरी छुट्टीको मौसममा। जब तपाईं कुनै दार्शनिक उत्पादन खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंको खरीदको अंश महिला र परिवारहरूको लागि उपचारलाई सहयोग गर्न समुदायमा आधारित अनुदानको लागि फन्ड हुन्छ। पर्ची एक जार मा आशा छ ($))) एक प्रियजनको स्टकमा, र मॉइस्चराइज्ड छालाको साथमा, तपाईं निराश वा चिन्तासँग संघर्ष गर्ने कसैलाई सहयोगी हात दिनुहुन्छ।
के मेथाडोन को लागी एक गलत सकारात्मक औषधि परीक्षण को कारण हुन सक्छ
तपाइँ कहिले थाहा सक्नुहुन्न जब छुट्टीको मौसममा कम्पनीले अप्रत्याशित उपहारको साथ छोड्नेछ। एक वाइन बाट बोतलहरु संग तपाईंको वाइन र्याक शेयर गर्नुहोस् (your २०- $ १००), त्यसैले तपाईं जहिले पनि उत्सव पेय वा पारस्परिक उपस्थितिको साथ तयार हुनुहुन्छ। जब तपाईं कारणबाट किनमेल गर्नुहुन्छ (varietal को सट्टा), तपाईं अनुसन्धानमा योगदान दिन रोज्न सक्नुहुन्छ अल्जाइमरको ईलाज वा दुर्लभ रोगहरु हटाउने ।
हजुरआमाबाट मोज़ाहरू… .ग्यान??? तपाईंले आफ्नो वार्षिक विलाप गर्नु भन्दा पहिले, त्यो प्रत्येकलाई थाहा दिनुहोस् सचेत संग्रह गिफ्ट सेट ($ .$.95)) ले संसारलाई अझ राम्रो ठाउँ बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। मोजाहरू छनौट गर्नुहोस् जुन उनको बाकसको लागि स fight्घर्ष गर्दछ, र विश्वस्त पार्नुहोस् कि तपाईंको तातो औंलाहरूले स्तनको क्यान्सरको पहिचानमा मद्दत गर्दैछ, सुरक्षित पानी प्रदान गर्दछ, र रूखहरू रोप्दछ।
जब शंका हो, क्यान्डी दिनुहोस्। चाहे यो आफ्नै आफ्नै हो, वा मोजा भर्ने, सबै छुट्टीको मौसममा मिठाई व्यवहारको मूडमा छन्। प्रत्येक खरीद गउरमेन्ट गममीहरू ($ १.5.9)) ले सात कारणहरू मध्ये एउटालाई समर्थन गर्दछ: मलेरियाको उपचार, रूख रोप्ने, घरबारविहीनहरूलाई आवास गर्ने, आवश्यक पर्नेहरूलाई सफा पानी पाउने, विकासशील देशहरूमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने वा स्कूलहरूमा बदमाशी रोक्न।
यदि तपाईं यस बर्षको साथी वा आफन्तहरूसँग बस्दै हुनुहुन्छ भने प्याक गर्नुहोस् ब्ल्याकआउट मैनबत्ती ($ 32) तपाईंको सामानमा। यो तपाईंको होस्टको लागि उत्तम उपहार हो, र उत्पादनहरू दुई भाइहरू द्वारा आँखा रोगको साथ डिजाइन गरिएको छ जुन समयको साथ अन्धाताको कारण हुन्छ। तिनीहरूको मिशन? प्रत्येक खरीद संग एक उपचार कोष।
एलेक्स र एनी
तपाईंको जीवनको विशेष महिलालाई केहि स्पार्कल दिनुहोस्। प्रत्येकको बीस प्रतिशत पीस र प्रेम चूली सेट ($ )$) खरीद मल्टिपल स्क्लेरोसिस उपचारको लागि समर्पित एमएस फाउन्डेशनको रेसमा जान्छ। स्वरोव्स्की क्रिस्टलले सजाएको, यो थोरै चीज हो जुन सबैसँग जान्छ।
तपाईंको खरबूजा मन पराउनुहोस्
जब तापक्रम बाहिर जान्छ, कसैको टाउको warm र मुटु warm को साथ न्यानो पार्दछ बीनी ($ )०) प्रेम तपाईंको खरबूजाबाट। सबै शुद्ध नाफाको आधा गैर नाफा लाई समर्थन गर्दछ जुन बाल चिकित्सा क्यान्सरको बिरूद्ध लड्छ।
सबैलाई थाहा छ कोही जसलाई टोटे चाहिन्छ। यो बुनेन ब्याग ($))) को साथ उनीहरूको सबै चीजहरू भण्डारण गर्न मद्दत गर्नुहोस्। प्रक्रियामा, तपाईं गर्भावस्था र बच्चा जन्म विश्वव्यापी महिलाहरूको लागि सुरक्षित बनाउँदै हुनुहुन्छ। एक सय प्रतिशत आयमा जान्छ सबै आमा गणना गर्दछ मातृत्व हेरचाह कोष गर्न।
तपाईंको साथीहरू वा आफन्तहरूका लागि जोसँग उनीहरूको नाक जहिले पनि किताब, उपहार मा हुन्छ एक चुम्बकीय बुकमार्क (वा दुई!) इम्पपेपरबाट ($ 50. .०)। तिनीहरूको व्यक्तित्वको लागि सही भनाइ छनौट गर्नुहोस्, वा यो समर्थन पुर्‍याउने दानबाट छान्नुहोस्। प्रत्येक खरीदले एक विशिष्ट वस्तु प्रदान गर्दछ:टिटानस खोप, पोलियो खोप, मलेरिया विरोधी गोली,एक पाउडर दूध पाउच, दुई पेन्सिल र एक बच्चाको लागि एक किताब, वा खाँचोमा परेकाहरूलाई चार खाना।
बच्चाहरूको क्यान्सरका लागि कुकीहरू
तपाईंलाई कुकी एक्सचेन्जमा आमन्त्रित गरिएको छ, तर तपाईं कहिले बेकरको रूपमा हुनुहुन्न। खाली हात देखाउँनुको सट्टा, एउटा झुण्डलाई लिनुहोस् चंकी चकलेट चिप ($ २। .99।) बाहिर क्रन्ची, र केन्द्रमा नरम, तिनीहरू घरकोठा जत्तिकै राम्रो छन्। प्रत्येक खरीद पेडियाट्रिक क्यान्सरको उपचारको लागि अनुसन्धान कोष — र तपाइँका साथीहरुलाई तपाइँको overcooked, जलाइएको गडबडी बचाउँछ।
तपाईंको जीवनमा संगीत प्रेमीको लागि, दिनुहोस् उपग्रह वायरलेस स्पिकर ($ .$.99।) यो कतै ल्याउन पर्याप्त सानो छ, तर ठूलो आवाज संग। प्रत्येक खरीदले स्टारकी हियरि Foundation फाउन्डेशनलाई विश्व सुनुवाई समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि श्रवण सहयोग प्रदान गर्दछ, त्यसैले कसैको जीवनको सुन्दर धुनहरू गुमाउनु पर्दैन।
सबैको लागी त्यस व्यक्तिको लागि केहि चाहिन्छ? तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने बच्चाहरूको लागि औषधि दान गर्नुहोस्, र तपाईंको प्रियजनलाई उनीहरूको नाममा राम्रो कार्यहरूको बारेमा कार्ड पठाउनुहोस्फोटो, तपाईंको उपहार को वर्णन, र एक निजीकृत सन्देश। तपाईको बजेटमा फिट हुने र तपाईको खरीदलाई मूल्यमा गुणन गर्ने रकम जीवन-बचतमा अनुवाद गरिएको पैसा लिन सक्नुहुन्छ एन्टिबायोटिक र आपूर्ति।
रगत दानको बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा
औषधि glipizide को लागी प्रयोग गरीन्छ
तपाइँको रगत को प्रकार तपाइँको व्यक्तित्व को बारे मा के भन्छ
दैनिक स्याउ साइडर सिरका पिउन को लाभ के हो
aleve मा दुखाई कम गर्ने के हो
मलाई कलेज को लागी कुन शट चाहिन्छ?
एक कम रक्त शर्करा स्तर पठन के हो